China Tungsten Carbide Moulds Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Tungsten carbide inogona kumanikidzwa uye kuumbwa kuita akaumbika maumbirwo, inogona kukuyiwa nemazvo, uye inogona kusunganidzwa kana kubatanidzwa kune zvimwe simbi. Mhando dzakasiyana uye mamakisi e carbide anogona kugadzirwa sezvaidikanwa kuti ishandiswe mukushandisa kwakatemerwa, kusanganisira indasitiri yemakemikari, oiri & gasi uye zvegungwa semigodhi nekucheka maturusi, chakuvhe uye kufa, kupfeka zvikamu, nezvimwewo Tungsten carbide inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri michina, pfeka zvishandiso zvinodzivirira uye anti-ngura.
Nekuda kweichi chishandiso kuramba kupfeka uye ngura, simende tungsten carbide inopa refu-yekupfeka zvinhu zvinokwanisa kuvandudza hwakazara hupenyu hweforoma.
Vagadziri vanoziva kuti mazhinji maturusi avo ekucheka akagadzirwa kubva kuTungsten carbide kudzora kupfeka kusati kwasvika, isu tinotenda kuti simende tungsten carbide inogona kupa vagadziri vekuwedzera mabhenefiti kana ichishandiswa yezvinhu zveforoma, kunyanya mapini epakati.
Iyo tungsten carbide muforoma zvikamu zvinogadzirwa kubva kune imwe kana akati wandei unofungidzira carbide (tungsten carbide, titanium carbide uye imwe hupfu) sechinhu chikuru, nesimbi poda (cobalt, nickel, nezvimwewo) sekunamatira kunogadzirirwa nehupfu simbi nzira. Inonyanya kushandiswa mukugadzira maturu ekumhanyisa-ekumhanyisa uye maturusi ekucheka, akaomarara uye ductile zvinhu, uye kugadzirwa kwekutonhora kufa, uye kwete nekuyera kukanganisa uye kudengenyeka kwenzvimbo dzakakwikwidza.
About kunzwisisa tungsten carbide muforoma zvikamu, unogona kutanga nokunzwisisa hunhu carbide.
1.Kuomarara kwakanyanya, kukwirira kusakara uye kukwirira kwakatsvuka
2. Yakakwirira simba uye modulus yekusununguka
3. Kwakanaka ngura kuramba uye yakanaka oxidation nemishonga
4. Coefficient diki yekuwedzera kwemitsetse
5.Haisisiri kugadzirisa uye kugadzirisa zvekare zvigadzirwa
Pashure: Tungsten Carbide Plates
Zvadaro: Tungsten Carbide Shaft Sleeve yePombi